Xisaabiyaha: Saadaali Sida Falanqayntaada internetka ay saameyn ugu yeelan doonto iibka | Martech Zone
Xisaabiyahani wuxuu bixiyaa koror ama hoos u dhac xagga iibka ah oo la saadaaliyay iyadoo ku saleysan tirada dib u eegista wanaagsan, dib u eegista xun, iyo dib u eegista la xalliyay ee shirkaddaadu ku leedahay khadka tooska ah.
Xisaabi Iibintaada Saadaasha ah ee Ay Saameyn Ku Yeesho Qiimaynta Internetka
Macluumaad ku saabsan sida qaaciidada loo sameeyay, hoos ka akhriso:
Foomka loogu talagalay Iibinta Kordhinta ee laga filayo Reviews Online
Xayeysiin waa B2B dib u eegista khadka tooska ah qabashada iyo wadaagida faallooyinka dadweynaha ee macaamiishaada khadka tooska ah. Trustpilot waxay ogaatay in tijaabada macaamiishooda ay muujineyso an kororka sicirka beddelka illaa 60%. Xaqiiqdii, iyada oo loo marayo falanqaynta in ka badan macaamiisha 2,000, waxay leeyihiin xisaabyahan soo saaray habka saxda ah ee xisaabinta kororka iibka ee la xiriira dib u eegista wanaagsan, dib u eegista xun, iyo dib u eegista xun ee la saxay.
Trustpilot waxay dooneysay inay baarto sida dib u eegista ay saameyn ugu yeelatay iibka, sidaa darteed waxay la wadaageen caan Xisaabiyaha Jaamacadda Cambridge, William Hartston, si loo sameeyo qaaciddo lagu xisaabiyo saameynta dhaqaale ee dib u eegista khadka tooska ah ee ganacsiga UK. Qaaciidada waa sida soo socota:
V = Boqolleyda kordhaysa dakhliga ganacsigaaga dib u eegista khadka tooska ah
P = Tirada dib u eegista togan
N = Tirada dib u eegista xun
R = Tirada ku qanacsanaanta lagu xalliyey dib u eegista diidmada ah
Waa kuwan muuqaalka muuqaalka guud ee ka hadlaya faa'iidooyinka dib u eegista internetka:
Daacad u ahaanta macaamiisha waa qayb muhiim u ah gebi ahaanba qorshe suuq-geyn kasta, laakiin adigoon isticmaaleyaashaada dhammaadka marqaatiyada ku wadaagin khadka tooska ah si rajadu u baari karto oo ay si toos ah ula xiriiri karto macaamiisha, qorshahaaga daacadnimada macaamiisha ayaan dhameystirnayn. U adeegsiga barxad si otomatig ah u ururinta, isku duba ridka, iyo dhiirrigelinta dib u eegista macaamiisha ayaa lagama maarmaan u ah ganacsiyada wax ku iibinaya khadka tooska ah.
Waa waqtigii magacyadu ay joojin lahaayeen cabsida dib u eegista khadka tooska ah oo ay bilaabaan fahamka awoodda jawaab celinta macmiilka. Dib u eegista khadka tooska ah waxay macaamiisha ka dhigtaa inay dareemayaan qiimeyn iyo maqal, ganacsataduna waxay u arkaan muuqaalo la taaban karo, kala duwanaansho la ogaan karo oo ku saabsan ROI, dakhliga, haynta macaamiisha, iyo heerarka gujinaya Haddii meheraddaadu aysan weli sameyn, waqtiga waa hadda.
Jan Vels Jensen, CMO oo ka tirsan Trustpilot
Dib u eegista khadka tooska ah waxay kordhisaa taraafikada, iibka, cabbirka gaadhiga, waxayna yaraynaysaa ka tagida gaadhiga.
Degso Doorka Halista ah ee Dib-u-eegista In Trust Internet
Tags: calculatordaacadnimada macaamiishasuuqgeynta daacadnimada macaamiishahaynta macaamiishadib u eegista macaamiishakordhinta iibka khadka tooska ahcalculator onlineururinta dib u eegista internetkamadal dib u eegis onlineFaallooyinka internetkagaadhigiina shoppingaaminaad
Xisaabta halkan waxay umuuqataa mid dirqi ah. Tusaalaha fiidiyowgu wuxuu siinayaa 120 wanaagsan, 20 diidmo, iyo 10 xalliyay dib u eegis diidmo ah. Haddii aan u dhigo lambarradaas qaaciddada kore waxaan helayaa 572.75 halkii aan ka heli lahaa 62.41% sida ka muuqata fiidiyaha.
Waad saxantahay, waxaan ubaahanahay inaan cusbooneysiiyo maqaalkan. Qaaciddada ayaa runtii ah V = 7.9 (.62P -.17N² + .15R).
Jun 5, 2021 saacadu markay ahayd 5:40 AM
OwO, qoraal aad u xiiso badan. Marnaba ha u maleynin inuu jiro kalkuleytar saadaalinaya Iibka Reviews Onlineka ah. Waad ku mahadsantahay Wadaagista Waan xisaabinayaa dhibcahayduna waa: 1620.53%. Waa maxay ra'yigaaga ku saabsan dhibcaha iibkayga?
Jun 9, 2021 at 4: 13 PM
Cajiib! Taasi waxay noqon doontaa boodbood iyo bogaadin ku saabsan dib u eegistaada.